Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Qubayska Musqusha ee ugu Fiican Hantida Kirada
2020 / 08 / 26 QoondayntaTilmaamaha qasabada 10443 0
Haddii aad horey u laheyd ama aad ku shaqeysid dhowr qaybood oo kiro ah oo aad u baahan tahay inaad dayactir ku sameyso, ama aad dhowr iibsatay oo aad rabto inaad cusbooneysiiso musqusha, mid ka mid ah go'aannada adag ee aad la kulanto ayaa ah go'aaminta waxa qasabada musqusha ugu fiican hantidaada kirada ah? Waa su'aal adag maxaa yeelay waxaa jira noocyo fara badan oo laga dooran karo qiimahana aad buu u sarreeyaa, laakiin halkan Wowow Faucets, jawaabta ayaan kuu haynaa adiga uun. Waa tan liiska tubooyinka musqulaha ku habboon guryaha kirada ah, oo mid ka mid ah uu hubaal ku qancin doono baahiyahaaga.
Qolka Qufulka Qolka Qubayska ee Keliyaalaha ah ee Chrome - $ 75.00
Qashin-qubka xirmadan qiiqa leh ee leh qaabkiisa aan waligeed la isticmaalin, khadhadh gacmeed, iyo dhammeystiray chrome dhammaystiran ayaa leh naqshad aan caadi ahayn oo qurux badan iyo qaabab saddex geesood leh oo Mareykan ah oo qaan-dhig u eg oo ka dhigi doona musqusha mid qurux u eg.
. Naqshadeynta qalabka tubbada musqusha - Waa fududahay is-rakibid. Looma baahna tuubiste!
. Naxaas - Waxaa laga abuuray naxaas waarta, oo la sameeyay oo lagu dhammeeyay gobolka tikniyoolajiyada farshaxanka, oo lagu farsameeyay gacanta. Muuqaal aan da 'lahayn iyo adkeyn. Adkaysi socon doona.
. Meelaha biyaha - Waxay la dagaallameysaa dhibco biyo, farahaaga, iyo dhammaantiis waxay hakin karaan muuqaalka tuubbooyinka. Waxay haysaa muuqaal cusub.
. Nadiif fudud Si khafiif ah u tirtir muuqaal nadiif ah oo dhalaalaya ayaa soo laabanaya isla markiiba.
. Ku dhawaad ​​dhameystiran musqusha kasta oo leh muuqaal qurxan.
Wuxuu ilaaliyaa biyaha
Habka sare ee loo yaqaan 'arc spout' waxaa ku jira hawo sare oo caan ah oo ilaaliya biyaha. Waxay ilaalisaa socodka dareeraha ah ee sahlan oo fudud iyada oo badbaadinaysa 50% biyo dheeraad ah. Bixiyeyaasha neoperl wuxuu ka horjoogsanayaa in biyaha biyuhu wax ku daadiyaan ama ku faafayaan waxaana laga saari karaa iyada oo aan dhib ku ahayn adeegsiga aaladda aan ku soo dareyno nadiifinta. Tani waxay ku siinaysaa mid ka mid ah khibradaha isticmaalaha ugu tayada sarreeya ee aad yeelan karto.
Heerka Sare ee Ceramic Valve
Waalka dhoobada wuxuu siiyaa khibrad dhibco ah oo si habsami leh ayuu isu beddelaa. Sidoo kale waa bilaash, sidaa darteed waad ku kalsoonaan kartaa in qoyskaagu badbaado qabo! Waxa kale oo jira kaydadka dhoobada-dhoobada ah oo heerkiisu sareeyo oo la tijaabiyey oo laga gudbay wareeg 500,000 ah. Waxaa loo sameeyay inay noqoto tan ugu fiican uguna waxtarka badan ee la heli karo. Nidaamka oo dhami wuxuu dhaafayaa heerarka cimriga dheer ee warshadaha!
Qolka Qubayska Qubayska Wejiga 2-Gacan Weyn ee Qulqulka Fog Chrome- $ 69.99
Qolka labiska ee gacanta lagu cabo ee Nickel muskeetka buluuga ah ee Faucet wuxuu ka qaadan doonaa suuligaaga raaxo ilaa qurux qurxoon oo leh nashqadeyn tafatiran, iyo soojiidasho aan da 'lahayn. Qeexitaankeeda heer sare ee heerka sare ee heerkulka, oo ka kooban bir adag oo naxaas ah bir-qabadkan aaladaha chrom wuxuu u adkeysan karaa daxalka taasoo si fudud uga dhex dhici karta musqulaha. Tan Qubayska Musqushaoo leh cillad sareeysa iyo chrome leh sidoo kale waxay la imaaneysaa dabool cufan dhogorta dhoobada ah iyo aoperl ayer, oo aad ugu fiican badbaadinta biyaha. Labada gacmeed waxay taageeraan socodka biyaha si sahlan waxayna sidoo kale leedahay xakameyn heerkulka biyaha.
Thanks to hal-abuurnimadiisa, naqshadda isku-xirka xawaaraha isku-xirka degdega ah way fududahay inaad is-rakibto inkasta oo loo baahan yahay ama qaali ah tuubbo-yaqaane. Intaa waxaa sii dheer, waxay leedahay meel la habeyn karo, oo lagu habeyn karo iyadoo loo eegayo baahidaada. Fikradda guryaha kirada ah, guryaha is-kaashatada ee cusub, guri gawaarida laga kireysto, guryo la kireysto iyo waxyaabo kaloo badan.
Musqusha Qasabada Hal Xamili 4 Inch Xarunta Wiishka Qasabadaha Qasabadaha - Madow -
Marka ay timaado doorashada qalabka saxda ah, qaabka, farsamada hal abuurka, waxaan halkaan joognaa WowowFaucet.com ujeedada dib-u-habeynta iyo inaan gaarno sida ugu fiican. Hadafkayagu waa inaan ku siinno tayada ugu sarreysa, ugu wax ku oolsan, iyo alaabooyinka ugu yar ee qaaliga ah si aad noloshaada u kobciso oo kaa caawiso inaad ku noolaato nolol ku habboon, hab-nololeed ka fudud! Waxaan kaa codsaneynaa inaad maskaxda ku hayso arintaas markaad wax naga iibsaneyso.
Qasabadda musqusha ee madow ee aasaasiga ahi waxay leedahay muuqaal muuqaal ah, oo ka duwan koromo duug ah oo caadi ah ama dusha nikeliyada la caday. Waxay siineysaa musqushaada dareen ah inuu yahay mid casri ah oo casri ah waana sahlan tahay in wasakhda laga ilaaliyo. Dheeraad uma liqi doonto dhibaatada ka dhalata miridhku.
. Qaadista Golaha Bullaacad - Tuubada Xarumaha leh wiishka bullaacadaha. Waxay ku habboon tahay 4 inji, 3 rakibidda daloolka, oo leh wiishka kor u qaadista waxay si fiican u daadin kartaa biyaha si aanad ugu qasbanayn inaad gacmahaaga wasakhdo.
. Tayada wanaagsan iyo farshaxanimada: Waxay ka kooban tahay zinc aluminium, oo leh kartoomo dhibicsan, makiinad ilaalinaysa 50% biyo iyo ilaaliye ka-hortaga, oo aad iska saari karto nadiifinta adoo adeegsanaya gacmahaaga oo keliya, aalado looma baahna.
. Rakibaad fudud: Dhammaan qalabkii la bixiyay. Waxay qaadataa 20 daqiiqo oo lagu rakibo. Kuu badbaadiyaa qiimaha biilka tuubooyinka waaweyn.
Qolka musqusha SInk Faucet 2 gacanta 4 3 Inch XNUMX Hood Madow- $ 45.88
Sida dhammaan alaabooyinka Wow, tan tubada qubeyska waxaa loo hayaa heerka ugu sarreeya. Waxay ka kooban tahay walxo si lama filaan ah loo doortay si loo hubiyo inaad u hesho qiimaha ugu badan lacagtaada.
. Naqshadaynta 2 Si sax ah oo sax ah oo ku saabsan biyaha iyo xakameynta heerkulka, cabirka 4 inji iyo 3-dalool leh ayaa qaadi doona barkadaha iyo barkadaha. Kor u Qaadida Golaha. Xirmooyinka dhoobada dhoobada leh.
. Basin qasabada - ABS soo-saare oo ilaaliya 50% biyaha waana caddeeymo kala-duwan. Qulub fiican Tayada badan oo qarsoon ayaa ka hooseysa dusha fudud.
Markaad iskood uga shaqeyneyso inaad hagaajiso guryaha kirada ah waxaad ogaanaysaa inaad marwalba tahay qof labaad oo naftaada qiyaasaya. Sababtoo ah go'aammada adigaa iska leh adiguna kaligaa, waxaad marwalba isweydiineysaa inaad runti wax sax ah samaynayso. Waa meel adag oo lagu jiro.
Waxaad sameysaa sida ugu fiican ee aad awoodid, laakiin dhab ahaan ma ogi cidda aad ku kalsoon tahay. Adigu ma tihid tuumbiile shati haysta, laakiin waxaad isticmaaleysaa xirfadaha ay tahay inaad si raqiis ah u sameyso hagaajinta aad u baahan tahay. Wowowfaucet.com waa meesha aad u leexan karto markaad u baahato talo ku saabsan hagaajinta musqushaada. Tubooyinkayagu waa kuwo tayo fiican leh, casri ah oo casri ah, oo casriyeysan lana casriyeeyay intii suurtagal ah inay ahaato. Waxaan ku dadaaleynaa inaan ku siino adeegga aad u baahan tahay oo aad u qalanto, iyo badeecadaha aad rabto qiimaha ugu hooseeya.
Waxaan rabnaa inaan safka hore ka galno tubada qubeyska bixiyeyaasha iyo inay kaa iibiyaan badeecada ugu fiican ee aan kari karno. Taasi waa sababta qasabadahayagu u yimaadaan dammaanad oo aysan ka yareyn farsamada gacanta. Sababtoo ah ma aaminsani inaad u hureyso tayada si aad lacag u keydiso, haddana waxaan ogaannay in dhaqaalahaagu aanu xad lahayn. Marka waxaan isku dubbarideynaa waxyaabaha ugufiican, uguna nadiifsan ee aan awoodno oo aan ku iibin karno qiimaha ugu qaalisan, dhammaantoodna waxay kaa caawinayaan inaad daboosho baahiyahaaga qasabadda kirada.
Hore:: Maxay Yihiin Qaar Ka Mid Ah Talooyin Iyo Tabaha Looga Qaado Quful Faneed Naqshadda Musqusha? Next: Waa maxay astaamaha Astaamaha Qulqulka Tooska otomaatiga ah?